Wasiirkii Amniga Jubaland Oo Lagu Amray Inuu Mandheera Ka Baxo Iyo Waxa Soo Kordhay | 18 May News
Wasiirkii Amniga Jubaland Oo Lagu Amray Inuu Mandheera Ka Baxo Iyo Waxa Soo Kordhay
February 10, 2020 - Written by Maxamed Cali
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Mandhera, xildhibaanada iyo senatarada laga soo doorto magaaladaas oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa ka hadlay xiisada ka taagan halkaasi.
Ugu horreyn mas’uuliyiintaan ayaa ugu baaqay dowladda Kenya in wasiirka amniga Jubbaland, Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisa ay ka saarto hoteello ay sheegeen inay ka dagan yihiin magaalada Mandhera oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi.
Sidoo kale sanatarada iyo xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda ayaa ku eedeeyey wasiir Janan iyo madaxweyne ku xigeenka Jubbaland inay qal qal amni ka wadaan magaalada, islamarkaana ay la soo galaan hub iyo ciidan, sida ay hadalka u dhigeen.
Dhankiisa gudoomiyaha ismaamulka Mandhera, Cali Roba ayaa sheegay in mas’uuliyiinta iyo ciidamada maamulka Jubbaland ay degmadiisa soo galeen markii dowladda Soomaaliya ay la wareegtay degmooyinka Doolow iyo Beled-Xaawo ee gobolka Gedo.
Cali Roba ayaa sidoo kale tilmaamay in aysan dooneyn in lagu kor dagaalamo dadka shacabka ah ee ay mas’uulka ka yihiin.
“Dadkii Maamulka u haayay Jubbaland oo laga soo bixiyay Doolow iyo Beledxaawo waxay soo galeen Mandhera oo qeyb ka mid ah ayay degan yihiin, anagoo rabin dowladda dhexe ee Kenya iyo dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ka socda inaan faragelino faragelin waxaa na saaran mas’uuliyadda shacabka iyo amniga reer Mandhera iyo umadda kale ee jiiraanka nahay amniga aan ku noolnahay nala noolaadaan ma rabno meeshaas in dhib ka dhaco”ayuu yiri goddoomiyaha Mandhera Cali Roba.
Arrintaan ayaa ku soo aadeysa, iyadoo horay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay Kenya uga dalbatay inay u soo gacan galiso wasiir Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah iyada, walow aysan illaa hadda si rasmi ah uga jawaabin dowladda dalka Kenya.